Moments leh saaxiibo 31
Miyuu suurtagal yahay oo waa sax in la eego mustaqbalka iyo saadaalinta dhacdooyinka mustaqbalka?
Waa suurta gal laakiin waa wax aan macquul aheyn in mustaqbalka la eego. In ay suurtagal tahay waxaa lagu caddeeyay bogag badan oo taariikhda ah. Marka laga hadlayo saxnimadeeda waa in lagu go'aamiyaa kartida qofka iyo go'aankiisa wanaagsan. Saaxiib kugula talin maayo mid kale inuu isku dayo inuu mustaqbalka eego. Qof mustaqbalka fiiriya sugi maayo in lagula taliyo. Wuu muuqdaa. Laakiin kuwa mustaqbalka fiirinaya, kuwa yar ayaa garanaya waxay eegayaan. Haddii ay eegaan oo ay arkaan, waa marka ay mustaqbalku noqodo waxa la soo dhaafay oo ay ogaadaan wixii ay arkeen markay arkeen. Haddii qofku si dabiici ah u arko mustaqbalkiisa, ma jiraan wax dhibaato ah oo gaar ah oo ku saabsan sii wadashadiisa, in kasta oo ay dad yar oo ka mid ahi ay ka faa'iidi karaan waxtarka hawlgalka. Waxyeelladu badanaa waa sida caadiga ah ka sii saadaalinta saadaalinta waxa uu fiiriyaha arko.
Haddii mid u eegmo ama arko mustaqbalkiisa wuxuu ku sameeyaa isaga dareenkiisa, taasi waa, dareenkiisa astral; ama awooddiisa, taasi waa, awoodaha maanka; oo ma jirto khatar gaar ah oo sidan la yeelo, maaddaama uusan isku dayin inuu isku daro dunidan uu ku arko adduunkan jireed. Markuu isku dayo inuu saadaaliyo dhacdooyinka mustaqbalka ee adduunkan waxa laga arko adduun kale, wuxuu ku wareeraa jahwareer; uma sheegi karo wixii uu soo arkay isla markaana ku habboonaan kara booskiisa mustaqbalka adduunkan jireed; waana sidaas in kastoo uu si dhab ah u arkay. Saadaalintiisa laguma kalsoonaan karo markii loo adeegsado dhacdooyinka mustaqbalka adduunkan jireed, maxaa yeelay kuwan uma dhacaan sidii loo saadaaliyay waqtiga, ama qaab ahaan, ama meel ahaan. Kii arkaa ama iskudaya inuu arko mustaqbalka wuxuu la mid yahay cunug wax arka ama iskudaya inuu arko waxyaabaha ku saabsan. Markuu ilmuhu awood u leeyahay inuu wax arko, waa wax lagu farxo, laakiin waxay ku kacdaa khaladaad badan fahamkiisa iyo xukumida waxa u arko. Ma qaddarin karo xiriirka iyo fogaanshaha u dhexeeya walxaha. Fogaanta uma jirto dhallaanka. Waxay isku dayi doontaa inay kaqeyb gasho chandelier iyo kalsooni aad u badan maadaama ay qabato sanka hooyadeed mana fahamto sababta aysan u gaarin chandelier. Qofkii mustaqbalka eega, wuxuu arkaa dhacdooyin iyo damacyo ay iyagu dhowaan dhici doonaan, maxaa yeelay isagu xukun ma leh xagga xidhiidhka ka dhexeeya waxa uu ku arko dunida oo uu ku arko, iyo dunida jireed, iyo sababta oo ah isagu ma awoodo inuu sameeyo qiyaaso waqtiga dunida jireed ee ay ku dhici karto laxiriirta dhacdada uu fiirinayo. Saadaalin badan ayaa rumowda, inkasta oo aan had iyo goor sidii loo saadaalin. Maaha wax aan caqli gal ahayn, sidaa daraadeed, in dadku ku tiirsanaadaan saadaalinta kuwa iskudaya inay mustaqbalka eegaan mustaqbalkooda iyagoo adeegsanaya wax loo yaqaan 'clairvoyance' ama dareenka kale ee gudaha, maxaa yeelay ma sheegi karaan saadaasha saxda ah.
Kuwa ku tiirsan saadaalinta ka imaanaysa waxa loogu yeedho “diyaarada gudaha” ama “iftiinka iftiinka,” waxay lumiyaan mid ka mid ah xuquuqdooda ugu qiimaha badan, taasi waa, xukunkooda. Maxaa yeelay, si kasta ha ahaato khaladaad fara badan oo qofku isku dayo inuu isku xukumo waxyaalaha iyo shuruudaha naftiisa, isagu si sax ah ayuu wax ugu xukumi doonaa barashada, oo wuxuu wax ku bartaa khaladaadkiisa; halka, haddii uu bartay ku tiirsanaanta dadka kale saadaalintiisa, weligiis go'aan culus ma yeelan doono. Mid saadaaliya dhacdooyinka mustaqbalka ma lahan wax hubaal ah oo ah inay soo socdaan run sida la saadaaliyay, maxaa yeelay dareenka ama kulliyadaha saadaalinta lagu sameeyo waxay la xiriirtaa dareenka kale ama kulliyadaha kale. Markaa qof arka ama maqla oo keliya, oo taas si aan caadi ahayn, oo isku daya inuu saadaaliyo wixii uu arkay ama maqlay, waxay u badan tahay inuu yahay mid sax ah dhinacyo, laakiin inuu jahwareero kuwa ku tiirsan saadaalintiisa. Habka kaliya ee la hubo ee loo saadaaliyo dhacdooyinka mustaqbalka waa midka saadaaliyay inuu caqligiisa ama maskaxdiisa si caqli ah u tababbaray; Markaa markaa dareen kasta ama kulliyadeed kasta waxay la xidhiidhi doontaa kuwa kale dhammaantoodna waa loo dhan yahay oo waxaa loo adeegsan karaa sida ugu saxsan sida kan nin awoodo inuu ugu adeegsado dareenkiisa ficilkiisa iyo laxiriira adduunkan jireed.
Qaybta ugu muhiimsan ee su'aasha ayaa ah: Ma saxbaa? Xaaladda uu ninku ku sugan yahay hadda ma ahan wax sax ah, maxaa yeelay haddii qofku awood u yeesho inuu isticmaalo dareenka gudaha oo uu la xiriiro dhacdooyinka iyo xaaladaha adduunyada jireed, waxay isaga siinaysaa faa'iido aan cadaalad ahayn dadka uu ku dhex nool yahay. Adeegsiga dareenka gudaha ayaa nin u saamaxaya inuu arko waxa dadka kale sameeyeen; aragtida taas oo sida xaqiiqada ah u horseedi doonta natiijooyin cayiman sidii tuurashada kubad hawada lagu rito waxay ku dambayn doontaa dhicitaankeeda. Haddii mid arkay kubbadda oo la tuuray oo uu kari karay inuu raaco qalooca duulimaadkeeda, oo uu khibrad u leeyahay, wuxuu ku qiyaasi karaa si sax ah halka ay ku dhici doonto. Marka, haddii qofku u adeegsan karo dareenka gudaha si uu u arko wixii horey uga dhacay suuqa saamiyada ama goobo bulsheed ama arrimaha gobolka, wuxuu ogaan lahaa sida looga faa’ideysto caddaalad darrada waxa loola jeeday in uu noqdo mid gaar ah, oo sidaas ayaa qaab yeelan kara. falalkiisa sidii uu naftiisa ugu faa iideysan lahaa ama kuwa uu xiiseynayay. Tan macnaheedu waa inuu noqdo agaasime ama taliye arrimaha wuxuuna ka faa'ideysan karaa oo xakameyn karaa kuwa kale oo aan lahayn awoodiisa oo kale. Sidaa darteed, kahor intuusan sax u noqon kara in ninku eego mustaqbalka oo uu saadaaliyo dhacdooyinka mustaqbalka si sax ah, waa inuu ka adkaaday damaca, xanaaqa, nacaybka iyo is-jeclaanta, damaca dareenka, waana inuu ahaadaa mid aan ku xirneyn wuxuu arko iyo saadaalintiisa. Waa inuu xor ka yahay damacyada lahaanshaha ama kasbashada waxyaalaha adduunyo.